Breathtaking Tareen Bridges In Europe | Save A tareenka
Home > Tareenka Safarka Switzerland > Breathtaking Tareen Bridges In Europe
Ku safrid tareen waxay caan ku tahay siinaya rakaabka qaar ka mid ah buundooyinka tareenka ugu quruxda badan, filimada views muuqaalka. Helitaanka fursad ay ku socdaalaan tareenka Bridges, waxaad ka arki kartaa hills rogid, baadiyaha, iyo badaha oo dhan ka kursi raaxo leh marka Toggooda soo Europe by rail. Mararka qaarkood tareenka laftiisa waa quruxda badan iska fududaysto. afar Kuwani tareenka Yurub Tareen Bridges aad neefta qaadi doono.
sodcaalladoodii rail Switzerland
Buundada tareenka Tani waa yaab cajiib naqshadaha. Waxaad ka arki kartaa lix dedan oo nuuradda nasanayso on shan tiir sare. Buundada waxay toos ugu socotaa Landwasser dhererkiisu yahay 216 mitir tunnel.
buundada u dhexeeysa webiga Landwasser u dhexeeya magaalooyinka Schmitten iyo Filisur, ee aagga Graubünden of Switzerland. Waxa kale oo la sheegay in a World Heritage Site UNESCO. Waa in howlgalka maanta oo uu ahaa tan iyo markii la dhameeyo in 1902.
Soo Railway Bridge, Tareen Bridges ugu sareeya ee Scotland
Scotland Rail buundada
Astaantan quruxda badan ee Iskotishku waxay ka gudubtaa Webiga Soo at Queensferry, kaliya galbeed ee Edinburgh.
Waxaa la sameeyey saddex steel double-cantilevers biiray by girders dheer. rivets weyn iyaga ku xidhmaan qaabka ugu muhiimsan ee Bridges tareenka ee. Piers dhagax adag taageeraan cantilevers ah. Waa dhab ah feat a of injineernimada Victorian.
buundada tareenka ayaa lagu soo gabagabeeyey 1890 iyo dayac tiray iyo kalareeyay in 2011-2012. Tareenka buundada soo ayaa a UNESCO World Heritage site tan 2005. Waxaa jira inta u dhaxaysa 190 iyo 200 ubaraan socda waxaa guud ahaan maalin kasta.
buundada Hohenzollern, Germany
Germany Tababar buundada
Webiga Rhine The kala qaybinaya u Jarmal magaalada Cologne. Toddoba buundooyinka soo gudbaan webiga haybad ee Cologne. The Hohenzollern Tareen Bridges ma aha oo kaliya ee ugu quruxda badan, laakiin sidoo kale buundada ugu weyn loola isticmaalo tareenka ee Germany. Waxaa arko in ka badan 1200 Tababar maalin kasta ee guud ahaan lixda kuwan raadkaygay.
Hohenzollernbrücke waa buundada ay xafiiltamaan ah, saddex dedan oo bir ah oo ay la socdaan oo dhererkeedu. Waxaa la dhamaystiray 1911 iyo dayac tiray 1940, 1950s, iyo 1980.
Tan waxa kaliya 409 mitir dheer, sidoo kale waxaa jira qayb ka mid ah buundada dadka lugeeya iyo baaskiil. Waxaa jira hal dhinac kasta oo tareenka ah. Dadku waxay bilaabeen inay meeleeyaan “xirmooyinka jacaylka” dayrka u dhexeeya rail iyo meelaha dadka lugta ah tan iyo markii uu 2008.
Viaduct ee Chamborigaud, France
France tareenada jir buundada
Waxaad ka heli doontaa this cajiib ah semicircular xafiiltamaan Tareen Bridges tuulada Faransiis ah Chamborigaud, dhamaystiray 1867. Waa weli la isticmaalo maanta.
Viaduct Dhagaxii gudbo webiga Luech ah. Waa buundo qalooca la dherer guud ee 387 mitir. Si kastaba ha ahaatee, waa mid aad u dhuuban at 14 milyan oo kaliya ballaaran. Viaduct ee xariiqa qallooca Chamborigaud ee kheyraad ee wajahaya, ka duwan ugu buundooyinka kale oo noocan oo kale ah.
Italy buundada tareenka taariikhiga ah
Viaduct tareenka waa tirada 31 on liiska buundooyinka ugu sareeya dunida ee tareenka. Waxay u taagan tahay 145 mitir sare oo kaliya 78 mitir dheer. Waxaa ku sugnaa dhamaadka ah Santa Giustina baddii in Dermulo, Northern Italy.
The gudubno Santa Giustina waa sameega iyo biyaha in la barwaaqaysan ka soo saaro korontada. Waxaa sidoo kale si fiican u yaqaan for isboortiga biyaha iyo laashash.
Milan si Dermulo Tareenadu Trento
Turin si Dermulo Tareenadu Trento
Padua in Dermulo Tareenadu Trento
Venice in Dermulo Tareenadu Trento
Ready in ay qaataan tareenku on tareenka Bridges a si ay u arkaan, kuwaas oo yaabab of Camalkiisa Anguna aadanaha? Buugga kursiga oo aadan bixin wixii kharash jaale at www.saveatrain.com.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, ka dibna riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbreathtaking-train-bridges-europe%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / TR si / ru ama fr / iyo luuqado badan.
#Edinburgh #Luechriver #Rhineriver #viaduct longtrainjourneys SwissAlps tareen safarka travelcologne